PD Avengers – United kwụsịrị Parkinson
"pdavengers.eu" na -eji asụsụ G -asụ asụsụ na -abịa n'asụsụ dị iche iche - nwute maka adịghị ike na izi ezi na ntụkwasị obi!
PD ndi ọbọ
United iji kwụsị Parkinson's
The Spark, nke sitere na dopamine
Nyere aka kpalie Logo nke ụbọchị ọrịa Parkinson
Ndị na -abọ ọbọ PD na -emeri 'ụmụ nwanyị na PD'
PD Avengers na -eto!
Ndị na -akwụ ụgwọ PD
Ahụmahụ gị, mkpali anyị
Ngosipụta na Lead na PD
Akụkọ gbasara ikpe ikpe Paraquat
Akwụkwọ Paraquat - Mmelite maka ịgba akwụkwọ US - ikike US ịma
Ọrịa Parkinson na Pesticides na Ray Dorsey
Ọrịa na ọgwụ
PCB (Polychlorinated Biphenyls) na PD
Ọnụọgụ nke ọrịa ọrịa Parkinson na-agbawa. Otu kemịkal nkịtị nwere ike ịta ụta
Ntughari uche Banyere Chemicals Na nwata
NSOGBU NKE PARAQUAT
A ka na -ahapụ titanium dioxide ka ọ bụrụ ihe enyemaka na ngwaahịa ọgwụ
Asọmpi vidiyo ịma ụbụrụ 2021
Ịmepụta Neurons Ọhụrụ: Ike nke Ịgbanwe Ọrịa Parkinson
Ọzụzụ ọmịiko Ọrịa Parkinson
Ike karịrị ọrịa Parkinson
Sugar: Eziokwu ilu
A PD na -abọ ọbọ - Mmalite
APD Avengers Move4ypd JUPP Olten | Schweiz | Suisse | Svizzera
A PD Avengers Germany
Ịụbiga mmanya ókè na ọrịa Parkinson
Partù France Parkinson
Òtù Na-ahụ Maka Ọrịa Parkinson nke America (APDA)
J. Michael J. Fox Foundation maka Nchọpụta Parkinson
Otu esi agbanwuo ndepụta okwu na YouTube
Afrika nke Parkinson
Womenmụ nwanyị nwere PD: na -aza mkpa na ịgwọ ọgwụgwọ ọmarịcha
🇪🇸 Campaña “na akpụkpọ ụkwụ m con p”
Mgbasa ozi 'N'ime akpụkpọ ụkwụ m' maka ọrịa Parkinson
Ịkwụsị Ọrịa Parkinson: AKWỤKWỌ
GDNF: Esemokwu na-aga n'ihu
Nyere aka kpalite mgbasa ozi ụbọchị Parkinson nke Eprel 11
Akwụkwọ akụkọ ọrịa Parkinson – Akwụkwọ akụkọ JPD – Mpịakọta 11, mbipụta 4
Akwụkwọ ozi edetu na Secretary General nke United Nations
Ozi sitere na Larry Gifford na July/August 2021
Ozi si Larry na Septemba 2021
Na-atụgharị uche na ahaghị nhata
Asaa Ihe Mere
Sparks nke Ahụmahụ
Gara aga, Ugbu a na Ọdịnihu nke Parkinson's
Ọnụ Anyị Dị Ike
WEBINAR: Ikpe nke Open Science Drug Development
Ebe James na-anọghị - WPC Blog
Kedu ihe bụ PD Avengers?
Kedu ihe ọgwụgwọ maka ọrịa Parkinson?
Gini kpatara Olu iri nde ise?
Gini mere m ji bụrụ PD onye ọbọ?
Kedu ihe kpatara na ọ bụ oge iji nweta dijitalụ
Impressum & amụma nzuzo
Ihe ịma aka mmega ahụ nke mba anyị niile "AktivZeit" na-aghọ mgbasa ozi na Europe ka ọ malitechara nke ọma.
N'ememe nke World Parkinson's Day na Eprel 11, 2022, anyị malitere ịma aka nke ọnwa abụọ iji nakọta 500,000 nkeji oge ọrụ maka ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ metụtara na Germany, Austria na Switzerland. Anyị ruru ihe mgbaru ọsọ nke mbụ ka ihe karịrị izu abụọ gachara, ma ugbu a, ihe ịma aka anyị na-agbasa n'ofe Europe.
Ihe dị ka mmadụ 1,000 esonyela ruo ugbu a, n'otu n'otu ma ọ bụ dịka otu. Ha na-agbasi mbọ ike n'egwuregwu dị iche iche, gụnyere ịkụ ọkpọ, tenis tebụl, ịgba ígwè na ịgba ụkwụ. Mana ịgba ịgba na ịgba egwu sokwa n'ihe kacha amasị gị.
Ogo a na-emelite kwa ụbọchị na-enye ndị sonyere ihe mkpali ka ha na-emega ahụ karịa, mana ebumnuche kachasị bụ naanị enwere ike imekọ ọnụ: mmụta karịa gbasara ọrịa Parkinson, nkwalite mmega ahụ na ịkparịta ụka n'Ịntanet.
Onye ọ bụla nwere ike sonye naanị ya ma ọ bụ n'ìgwè, nwere ma ọ bụ na-enweghị ọrịa ahụ. Ọ ka nwere ike isonyere n'oge ọ bụla ruo 11.06.2022, n'ihi na nkeji ọ bụla na-arụ ọrụ na-adabere maka nsonaazụ zuru ezu. Ka ọ dị ugbu a, ndị otu na-enyere onwe ha aka, ụlọọgwụ na ọbụna klaasị ụlọ akwụkwọ na-eji ịnụ ọkụ n'obi ekere òkè na mkpọsa ahụ.
Ọbụna ndị nhazi 6, ndị niile na-ata ahụhụ site na ọrịa Parkinson n'onwe ha, atụghị anya nnukwu ihe ịga nke ọma dị otú ahụ: Ugbua mgbe ụbọchị 17 gasịrị, e nwetara ihe mgbaru ọsọ ịma aka na 500,000 nkeji na-arụ ọrụ na weebụsaịtị. www.aktivzeit.org e chịkọtara. Ugbu a ọ na-abanye na ọkwa na-esote: 1,200,000 nkeji na-arụ ọrụ maka nde mmadụ 1.2 nwere ọrịa Parkinson bụ ihe mgbaru ọsọ ọhụrụ.
Ọrịa Parkinson bụ ọrịa akwara ozi na-enweghị ngwọta nke nwere ọtụtụ akara ngosi. Ihe ịma aka a chọrọ n'elu ihe niile iji kwalite mmega ahụ, n'ihi na mmega ahụ kwa ụbọchị bụ otu n'ime ọgwụgwọ kachasị mkpa maka igbu oge na-aga n'ihu nke ọrịa ahụ.
Ịkwụsị Ọrịa PARKINSON.
Ọrịa Parkinson, chọpụtara ihe karịrị afọ 200 gara aga, bụ ọrịa akwara ozi na -eto ngwa ngwa n'ụwa. A ka nwere ọgwụ ọ bụla.
Ndị PD na -abọ ọbọ bụ njikọta zuru ụwa ọnụ nke ndị nwere ọrịa Parkinson, ndị mmekọ anyị na ndị enyi anyị, na -agbakọ ọnụ ka ha chọọ mgbanwe n'otú e si ahụ ọrịa na ahụ ya.
Site n'ike mmụọ nsọ n'akwụkwọ "Ịkwụsị Ọrịa Parkinson," anyị na -ejikọ otu nde olu ka ọ na -erule 2022 ka anyị guzoro ọnụ n'aha obodo Parkinson.
Ị ga -abụ onye ọbọ PD?
Nde mmadu 10 Nde mmadu bi na Parkinson
🔴 Nde mmadụ 50 na-ebu ibu ahụ n’onwe ha, ma ọ bụ site n’aka onye ha hụrụ n’anya
Otu onye n’ime mmadụ iri na ise dị ndụ taa ga-arịa ọrịa Parkinson. A na - ahụ ọrịa ahụ n’ebe niile n’ụwa. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mpaghara ọ bụla, ọnụọgụ ọrịa Parkinson na-aba ụba
N'ime afọ 25 gara aga, ọnụ ọgụgụ ndị nwere ọrịa Parkinson amụbaala okpukpu abụọ, ndị ọkachamara na-ekwukwa na ọ ga-amụba okpukpu abụọ tupu 2040
Impact Ọnọdụ akụ na ụba nke ọrịa a bụ ọdachi nye ọtụtụ ndị mmadụ na ezinụlọ ha
Anyị agbachi nkịtị ogologo oge. Oge erugo ime ihe.
PD Avengers abụghị ọrụ ebere na ha anaghị achọ ego. Ha anaghị anwa ịnọchi ọrụ ndị ọrụ ebere na ndị ọrụ ahụike na-arụ n'ụwa niile. Nanị, ha na-achọ ịkpọkọta olu ha ọnụ iji chọọ mgbanwe etu esi ahụ ma gwọọ ọrịa ahụ.
Na mbụ sitere n'ike mmụọ nsọ nke akwụkwọ ahụ,Ọgwụ Ọrịa Parkinson, ”PD Avengers kwenyere na enwere ike ịmekwu ihe. Ihe nde mmadu iri choputara n'uwa nile, ndi ezinulo ha na ndi enyi ha ndi nwere nsogbu a kwesiri otutu ihe.
Banye na PD Avengers na-efu ihe ọ bụla, mana ịkwụsị ọrịa ahụ ga-abụ ihe na-enweghị atụ maka ọtụtụ.
Ga-esonyere m wee bụrụ PD onye ọbọ? pịa ebe a maka ihe dị mfe, ọ dịghị ọrụ ntinye aka isonye na iti mkpu iji kpochapụ ọrịa Parkinson. Ana m ekele gị nke ukwuu maka ịbanye m na ọrụ a dị mkpa.
Copyright © 2022 PD ndi ọbọ. Ikike niile echekwabara. Okwu Gburugburu by Onyeka Onwenu Kwadoro site na: WordPress.